Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247622 times)
« Reply #430 on: August 05, 2011, 11:10:51 AM »
" ပြု ပြင် ပြောင်း လဲ ရေး "
" ပယ်ရီစထရိုက်ကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လမ်းစဉ်ကို ခင်ဗျား ဘယ်လို သဘောထားသလဲ.. "
" ထောက်ခံပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ စည်းကမ်းချက်နဲ့ထောက်ခံချင်တယ်. "
" ဘာ စည်းကမ်းချက် ပါလိမ့်.. "
" ကျနော်တို့ ဆီမှာ အဲ့ဒီ့ လမ်းစဉ်ကို အကောင်အထည် မဖော်စေချင်ဘူး.. "
( ရုရှားနိုင်ငံ`၌ ပယ်ရီစထရိုက်ကာ ခေတ်က ပေါ်ခဲ့သော ဟာသ )
« Reply #431 on: August 06, 2011, 09:19:10 AM »
" ကြက် တူ ရွေး အာ ခေါင် နီ "
ရဲသားတစ်ယောက် အိမ်တစ်အိမ်ရှေ့ က ဖြတ်လျှောက်လာသည် ။ အိမ်ရှေ့ ဝရန်တာရှိ လှောင်အိမ်ထဲမှ
ကြက်တူရွေးက အော်သည် ။
" ဂျက်ဖရီ ..သောက်ရူး... ဂျက်ဖရီ ..သောက်ရူး.... ဂျက်ဖရီ ..သောက်ရူး "
ရဲသားက ကြက်တူရွေး ပိုင်ရှင်ကို ဒဏ်ရိုက်လိုက်သည် ။ နောက်တစ်နေ့ဖြတ်လျှောက်သောအခါ ယခင်
အတိုင်း ကြက်တူရွေးက အော်သည် ။ ဒဏ်ငွေ ရိုက်လိုက်ပြန်သည် ။ နောက်ရက်များတွင်လည်း ဤအတိုင်း
အော်သဖြင့် ရဲသားက ဆက်တိုက် ဒဏ်ရိုက်သည် ။ နောက်ဆုံး ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ စိတ်ညစ်လာပြီး မိမိ၏ ကြက်တူ
ရွေးကို ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး၏ ကြက်တူရွေးနှင့် လဲလိုက်သည် ။
လဲပြီး နောက်တစ်ရက်တွင် ရဲသား အိမ်ရှေ့ဖြတ်လျှောက်လာရင်း ၀ရန်တာဘက် မော်ကြည့်သည် ။ ကြက်တူ
ရွေးထံမှ ဘာသံမှ မကြားရချေ...။ ရဲသားက အော်ပြောသည် ။
" ဟေ့ကောင် ...ဘာဖြစ်လို့မအော်တာလဲ.. ၊ ငါလေ.. ဂျက်ဖရီ.. သောက်ရူး လေ.. "
ကြက်တူရွေးက ပြန်ပြောသည် ။
" အခုမှ နောင်တ ရလို့မထူးဘူး ..ငါ့သား... "
« Reply #432 on: August 06, 2011, 09:36:28 AM »
" တွေ့ခဲ့ ရ သည့် စာ တန်း များ "
တိရစ္ဆာန်ရုံရှေ့- ၀က်ဝံကို မထိပါနဲ့ ..၊ ၄င်းသည် ကုတင်ဘေးက ကော်ဇော မဖြစ်သေးပါ..။
လေဆိပ်အတွင်း - အချိန်မီ ဖက်ရမ်း နှုတ်ဆက်ကြပါ..၊ လေယာဉ်များ သတ်မှတ်ချိန်တွင် အတိ
အကျ ထွက်လိမ့်မည် ။
ပန်းဆိုင်တံခါးရှေ့ - အိမ်ထောင်ရှင် ယောင်္ကျားများပင် ၀ယ်ချင်စိတ်ပေါ်လောက်အောင် ကျွန်ုပ်တို့ 
ဆိုင်က ပန်းများ ဈေးနှုန်း ချိုသာပါသည် ။
တယ်လီဖုန်းရုံရှေ့ - သတ်ပုံအမှားများကို ရှောင်ရှားလိုလျှင် စာမရေးပါနှင့် ။ တယ်လီဖုန်းပဲ ဆက်ပါ.။
« Reply #433 on: August 06, 2011, 09:57:08 AM »
" အ ပျင်း ထူ သူ များ "
သူ ပိုပျင်းသည် ၊ ငါ ပိုပျင်းသည် နှင့် လူနှစ်ယောက် အငြင်းပွားနေကြသည် ။
" တစ်နေ့ က ဒေါ်လာ ၁၀၀ လမ်းမှာ ကျနေတာကို ငါတွေ့ တယ်..။ ဒါပေမဲ့ ငါ
မကောက်လိုက်ဘူး..။ ပျင်းလို့"
ကျန် တစ်ယောက်က အားကျမခံ ပြောသည် ။
" တစ်နေ့ က ငါ ရုပ်ရှင် သွားကြည့်တယ်.။ နှစ်နာရီ တိတိ ရုံထဲမှာ ငါ အော်နေရတယ် "
" အော်တာနဲ့ပျင်းတာ ဘာဆိုင်လို့ လဲ.. "
" သိပ်ဆိုင်တာပေါ့... ခေါက်ကုလားထိုင်ကို ဆွဲပြီး အထိုင်လိုက်မှာ ငါ့ရွှေဥ ညပ်သွား
တယ်..။ ထရမှာ ပျင်းတာနဲ့အော်ပဲ အော်နေရတာပေါ့.. "
« Reply #434 on: August 06, 2011, 10:27:27 AM »
" မင်း လို လူ စား အ များ ကြီး "
ဒုတိယမြောက် ဖရက်ဒရစ် ဘုရင်သည် မိမိနှင့်အတူ လှေလိုက်စီးရန် စာရေးဆရာကြီး
ဗော်လ်တိုင်းယား ကို ဖိတ်ခေါ်သည် ။ ဖိတ်ကြားချက်ကို ဗော်လ်တိုင်းယား ၀မ်းသာ
အားရ လက်ခံပြီး နှစ်ယောက်သား လှေစီးကြသည် ။ ကမ်းမှ ထွက်ခါစပင် ရှိသေး
သည် လှေထဲ ရေ၀င်နေသည်ကို တွေ့ ရသည်နှင့် ဗော်လ်တိုင်းယားသည် ကမန်းကတန်း
ကမ်းပေါ် ပြန်တက်သည် ။ ဖရက်ဒရစ် ဘုရင်က သရော်ပြုံး ပြုံးရင်း ပြောသည် ။
" ခင်ဗျား သေမှာ အင်မတန် ကြောက်တာပါကလား..။ ကျနော့်ကို ကြည့်..လုံးဝ မကြောက်
" ဒါ မထူးဆန်းပါဘူး...။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘုရင်တွေ အများကြီး...၊ ဗော်လ်တိုင်းယား က
တစ်ယောက်ပဲ ရှိတယ်.. "
« Reply #435 on: August 06, 2011, 10:36:57 AM »
" သ ဏ္ဍာန် လုပ် သ ရုပ် ပါ ရ မယ် "
ကိုယ်လက် ကိုက်ခဲသလို.. ဖျားသလို ဖြစ်သဖြင့် ရဲဘော် ချူချာ ဆေးတပ်ဗိုလ်ကြီးထံ
ရောက်လာသည် ။ ဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးက ရဲဘော်၏ ရင်ဘတ်ပေါ် နားကြပ်ဖြင့် ထောက်
လိုက်ပြီး ချောင်းဆိုးပြရန် ပြောသည် ။
" ကျနော် အခု ချောင်းမှ မဆိုးပဲ ခင်ဗျာ.. " ရဲဘော် ချူချာ ပြန်ပြောသည် ။
" ဟေ့...အမိန့် ကို နာခံခြင်းဆိုတာ မင်း နားလည်တယ် မဟုတ်လား. " ဆရာဝန်က
အသံမာမာဖြင့် ပြောသည် ။
" ကိုယ့်ထက် အဆင့်မြင့်သူရဲ့အမိန့် အတိုင်း တစ်သဝေမတိမ်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်.. " ရဲဘော်က ပြန်ဖြေသည် ။ ထို့ နောက် အဟွတ်..အဟွတ် ဟုချောင်း
ဆိုးပြသည် ။ ဆရာဝန်ဗိုလ်ကြီးက ရဲဘော်ကို ကြည့်လိုက်ပြီး မေးသည် ။
" အခုလို ချောင်းဆိုးတာ ကြာပြီလား "
« Reply #436 on: August 06, 2011, 10:46:09 AM »
" ဟာ သ အ ကျိုး "
" ကိုထွန်းအေး .. ခင်ဗျား ပြောပြတဲ့ ဟာသကို ကျုပ် မိန်းမကို ပြန်ပြောပြလိုက်တာ
အခု ကျုပ်ကို စကားမပြောတာ တစ်ပတ် ရှိသွားပြီ... "
" ဟာ....ဒါ ဟန်ကျတာပေါ့...၊ အခု ခင်ဗျား ယောက္ခမကိုပါ ပြောပြလိုက်.. "
" ဘယ် သူ မှ မ ရိုး ပါ ဘူး "
" စက်ရုံက ပစ္စည်းတွေ ခိုးမှုနဲ့ကျနော်တို့ ရဲ့စက်ရုံလုပ်သား ၅၀ တရားစွဲခံရတယ်. "
" ကျုပ်တို့စက်ရုံမှာတော့ ဒါမျိုး လုံးဝ မဖြစ်နိုင်ဘူး.. "
" ဘာလဲ..ခင်ဗျားတို့စက်ရုံမှာ အားလုံးက လူရိုးတွေ ချည်းပဲလား.. "
" ဒါကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး...။ ကျုပ်တို့စက်ရုံမှာ ၀န်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း ၃၀ ပဲ
« Reply #437 on: August 06, 2011, 11:02:34 AM »
" ဟာ သ တန် ခိုး "
" မင်းကို ကြည့်ရတာ အတော် ပျော်နေပုံပါလားကွ.. ဘာအကြောင်းများ ရှိလို့ လဲ.. "
" မင်းပဲ စဉ်းစားကြည့်လေ.... စားသောက်ဆိုင်မှာ နေ့ လယ်စာ အ၀ စားခဲ့တယ်
၀ီစကီ သုံးခွက်သောက်တယ်..၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ပြားမှ မပေးခဲ့ရဘူး.. "
" တယ်ဟုတ်ပါလား.. မင်း ဘယ်လို လုပ်ခဲ့လို့ လဲ.. "
" စားပွဲထိုးကို ငါ ဟာသ တစ်ပုဒ် ပြောပြလိုက်တယ်..၊ ဒီငနဲ ရယ်လိုက်တာ ..ရယ်
လိုက်တာ..ဘယ်လောက်အထိ ရယ်သလဲဆိုရင် ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ တောင် မေ့သွား
တယ်...ငါကလဲ သူ့ ကို သတိ မပေးဘူးလေ... ဟဲ ဟဲ "
ဤစကားကို ကြားရသော ဒုတိယ ဟာသသမားသည် ထိုစားသောက်ဆိုင်သို့ သွား
ကာ စားချင် သောက်ချင်တာကို မှာလိုက်သည် ။ စားသောက်ပြီးသောအခါ စားပွဲ
ထိုးကို ရယ်စရာ ပြောသည် ။ ၄င်း ပြောသော ဟာသမှာ အလွန်ရယ်စရာကောင်း
သဖြင့် စားပွဲထိုးသည် အားရပါးရ ရယ်သည် ။ မျက်ရည်ထွက်လုမတတ် ဖြစ်သည် ။
ဤတွင် ဟာသ သမားက စားပွဲထိုးကို ပြောသည် ။
" ကျနော့်ကို ပြန်အမ်းငွေ ပေးဖို့မမေ့နဲ့ ဦးနော်.. "
« Reply #438 on: August 06, 2011, 11:09:30 AM »
" ဘယ် လို သောက် ရ မ လဲ "
ဧည့်သည်က ဟိုတယ် မန်နေဂျာကို ခေါ်လိုက်သည် ။ မန်နေဂျာ ရောက်လာသော အခါ
ဧည့်သည်က ပြောသည် ။
" ကျနော့်ကို ပေးထားတဲ့ ဟင်းချိုကို သောက်ကြည့်စမ်းပါ "
" လူကြီးမင်းခင်ဗျာ.. ဆားပေ့ါတယ်.. ဒါမှ မဟုတ် .. ဆားငန်တယ် ဆိုရင်.. "
" ခင်ဗျားကို ကျနော် ထပ်ပြောမယ်.. ကျနော့် ဟင်းချိုကို သောက်ကြည့်စမ်းပါ... "
မန်နေဂျာသည် ထိုလူ ထိုင်နေသော စားပွဲတွင် ၀င်ထိုင်လိုက်ကာ ဟင်းချိုကိ်ု သောက်ကြည့်
ရန် ပြင်သည် ။
" ဟင်.... ဒီမှာ ဇွန်းမှ မရှိဘဲ.. ၊ ကျနော် ဘယ်လို သောက်ရမလဲ ခင်ဗျ.. "
" အောင်မလေး ဗျာ....၊ ခင်ဗျား အခုမှ သဘောပေါက်တော့တာကိုး... "
« Reply #439 on: August 06, 2011, 11:18:21 AM »
" ပင် ဂွင်း ငှက် "
အီတလီနိုင်ငံ .. ရောမမြို့ တွင် ဖြစ်သည် ။ ဘတ်စ်ကားပေါ်တွင် လိုက်ပါလာသော
တိုတို အမည်ရှိ ချာတိတ်သည် မိမိ၏ ဘေးနားတွင် ထိုင်နေသော မယ်သီလရှင်
( ကက်သလစ် ခရစ်ယာန် ) ကို စိတ်ဝင်စားစွာ ကြည့်သည် ။ ထို့ နောက် မယ်သီ
လရှင် နှင့် စကားလက်ဆုံကျသွား ကြသည် ။ တိုတို ဆင်းရမည့် မှတ်တိုင်သို့ ရောက်
သောအခါ တစ်ခုံကျော်တွင် ထိုင်နေသော တိုတို၏ အမေက မယ်သီလရှင်ကို အား
နာစွာ ပြောသည် ။
" အားနာလိုက်တာ မာသာရယ်...။ ကျမ သားလေးဟာ အမေးအမြန်း သိပ်ထူတယ်ရှင့်..
တစ်ခုခု မှားတာရှိရင် ဗွေမယူပါနဲ့ နော်.. . "
" ရပါတယ်....ကိစ္စမရှိပါဘူး...။ တစ်ခုပဲ တောင်းပန်ချင်တယ်...ကျမဟာ တစ်ကယ်တမ်း
ဆိုရင် ပင်ဂွင်းငှက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကလေးကို မပြောလိုက်ပါနဲ့ နော်..... "